Umlando waseCato Manor – The Ulwazi Programme
ICato Manor esendaweni engamakhilomitha ayisihlanu ukusuka enkabeni yeTheku indawo ecebile ngamagugu amasiko nezepolitiki, yaqanjwa ngemeya yokuqala yeTheku, uGeorge Christopher Cato. Izakhamizi zokuqala zaseCato Manor, izingadi ezimakethe zaseNdiya, uCato athengisela kuzo umhlaba, kamuva zaqashisa imindenini yase-Afrika yayinqatshelwa ukuba nomhlaba. Isiko eliqhakazile, le-Afro-Indian elavela kule ndawo eyabiwe laba uphawu lwendawo. Izakhamizi zakhona ezingamaZulu zazazi inqwaba yemijondolo, amashibhini nezitolo ezakhula zaba yiCato Manor njengeMkhumbane – eyaqanjwe ngomfudlana owawusonqenqemeni lwemijondolo. UCato Manor wasinda futhi wachuma iminyaka eminingi njengomphakathi onngenamahloni nophikisana nenqubomgomo kahulumeni wobandlululo yokubandlululwa ngokohlanga.
Izakhamizi ezidumile ezifana nomculi uSipho Gumede, usopolitiki uJacob Zuma, isishoshovu uFlorence Mkhize, usomabhizinisi uPrince Sifiso Zulu, intatheli ye-Drum uNat Nakasa kanye nenyunyana yabasebenzi uGeorge W. Champion abakhona iCato Manor “njengendawo lapho abomdabu baseThekwini (abantu base-Afrika) bengaphefumula khona umoya wenkululeko. ” Isithunzi salo sasidume kangangokuba umbhali wamanoveli u-Alan Paton wabhala umdlalo weshashalazi obizwa ngokuthi UMkhumbane set in Cato Manor.
I-1949 Race Riots
Ngaphandle kokuxhumana kwansuku zonke phakathi kwezakhamizi zaseNdiya nezase-Afrika, ezazihlala , kwakukhona ukungezwani ngokobuhlanga. . Imali ekhokhwayo yabaqashi lapho kuvame ukukhokhiswa abaqashi baseNdiya ngokumelene nabaqashi babo base-Afrika ababhekana nezimo ezimbi zokuhlala, ezibonakala ngokugcwala okukhulu. Ku ”Working Class Hero”, umbhali wemidlalo uKessie Govender ubheka ukuxhashazwa kwamaNdiya emphakathini wase-Afrika eCato Manor.
URonnie Govender’s “Emaphethelweni” nezinye izindaba zaseCato Manor zichaza izidubedube zango-1949, ezasuswa yisigameko esenzeka kuGrey Street lapho isitokofela saseNdiya sasibambe umfana wase-Afrika entshontsha futhi samjezisa. Abantu base-Afrika baqala ukuhlasela izitolo zamaNdiya, amabhizinisi kanye nezakhamizi. Izidubedube zashesha zaba yimpi yomncintiswano lapho abanye abantu abamhlophe besusa uthuthuva. Isimo saba sibi njengoba izixuku zase-Afrika sasizulazula emigwaqeni yaseCato Manor zihlasela izakhamuzi zaseNdiya. Ngalobo busuku kwanda ukushiswa kwezinto, ukuphanga nokudlwengula. Iphunga likaphethiloli nopharafini lalisemoyeni kanti isibhakabhaka sasebusuku sasikhanya ngenxa yokugqamuka kwamalangabi. AmaNdiya anezimoto ayebaleka. Kwathatha izinsuku ezimbili ukuthi iziphathimandla zisilawule lesi simo. Ngaleso sikhathi izitolo eziningi namakhaya asecekelwe phansi, kwashona abantu abangu-137 kwathi izinkulungwane zalimala.
I-1959 Beerhall Riots
Ngeminyaka yango-1950, amaZulu asezindaweni zasemakhaya ethuthela eThekwini ukuyosebenza afuna iCato Manor njengendawo ekahle yokuhlala. Le ndawo yakhula ngokushesha yakwamukela ukungena kwabantu abanemijondolo engu-6000 – izindlu ezungeze abantu abangu-50 000 – ezazakhiwe esikhathini esingangonyaka. Ukuze bathole imali, abesifazane base-Afrika babenza futhi bathengise ubhiya kubahlali besilisa. UNkosi uchaza kabanzi nge-Mating Birds, ”iCato Manor, abesifazane base-Afrika babephila ngokugaya utshwala obungekho emthethweni obizwa nge-skokiaan, obabukufakwa i-methylated spirit ukuze bubemnandi, budakwane. Lesi siphuzo esiyingozi nesonakalisa ingqondo sabe sesinikwa nsuku zonke abasebenzi abamnyama, okwakuthi njalo kusihlwa, lapho nje bephuma emsebenzini, bathutheleke baye emashibhini abawathandayo, lapho babephuza khona ”. UMasipala weTheku wahlangabezane nezinkinga zokulawula ukwenziwa kotshwala ngokungemthetho, obekuqhudelana namahholo abo kaMasipala obhiya. Ukugasela kwamaphoyisa eCato Manor kwahlukumeze izakhamizi zadala isimo esingahle.
Phakathi nawo u-1950, le ndawo yayisiphenduke isizinda sezepolitiki, lapho uChief Albert Luthuli ethola ukwesekwa kwe-African National Congress (ANC) ngokuxhumanisa izinkinga zaseCato Manor nomzabalazo omkhulu wokulwa nobandlululo. UMi S’dumo Hlatshwayo, ingane yaseCato Manor futhi ethonywe yipolitiki yayo, ngokuhamba kwesikhathi wabhala izinkondlo zomzabalazo – eziqoqwe kwi-Black Mamba Rising – ezahlanganisa abasebenzi ukuba balwe nohulumeni. Ephawula ngokuhlukaniswa kwabantu base-Afrika e-Apartheid South Africa, uHlatshwayo wabhala:
Namuhla ubizwa ngeBantu,
Kusasa ubizwa ngeKhomanisi
Kwesinye isikhathi ubizwa njengowoMdabu.
Namuhla ubizwa futhi ngokuthi ngisifiki,
Namuhla futhi ubizwa nge-Terrorist
Lokhu kuhlukaniswa okwakungahleliwe okudlulele lapho uhulumeni ezokwazi khona ukuhlela kabusha izindawo ukuze zihambisane nezidingo zabo.
Ukususwa kwabantu eCato Manor
Umkhandlu omhlophe waseThekwini wazizwa usongelwa umphakathi omkhulu wabantu base-Afrika nabaseNdiya osopolitiki emnyango wabo kwathi ngo-1959 iCato Manor yamenyezelwa njengendawo yabamhlophe ngaphansi komthetho i-The Group Areas Act (1950). URonnie Govender ubhale wathi, “Bekulapha lapha ngombhalo wokumnyama-nomhlophe. Okungenakwenzeka kwakwenzekile. Egameni lentuthuko yomphakathi, egameni lamalungelo amaqembu nokuvikelwa kwamaqembu, egameni lempucuko yasentshonalanga, iCato Manor yamenyezelwa njengendawo yabamhlophe. Yonke imindeni ebihlale lapho izizukulwane ngezizukulwane manje sekufanele zishiye amakhaya azo, ishiye iziqephu zayo zomhlaba. ” Kwaqala kwaqala ukukhishwa ngenkani ezindaweni zaKwaMashu, eMlazi naseChatsworth ezazicwasana ngokwebala. Lokhu kwakwenziwakakhulu yizakhamizi zaseCato Manor, ngombhikisho owawugxile ekungathandini ku-Municipal Beerhalls, izimpawu zikahulumeni wobandlululo. Lezi zidubedube, ezabe sezaziwa nge-Beerhall Riots, zagcina ngokuthi isixuku sibulale amaphoyisa ayisishiyagalolunye.
Ukuphendula, iCato Manor yadilizwa – umphakathi nomlando wawo wabhujiswa. URonnie Govender wabhala, “Sakhe ikhaya lethu, izikole zethu, amathempeli ethu, amathempeli ethu namasonto ethu ngothando nangokusebenza kanzima. Akulungile ukuthi uhulumeni, esingenakumphikisa, athathe kithi okungokwethu ngokusemthethweni. Lokhu ukubamba inkunzi ngokusemthethweni. ”
Noma nje le ndawo manje ‘yayiyindawo emhlophe’ ihlala iyindawo engcwele amaHindu, izisekelo zezakhiwo kanye nesihlahla sezithelo ngezikhathi ezithile ukusikhumbuza ngalo mphakathi owake waba namandla.
ICato Manor Street Ngasekupheleni komndeni wobandlululo, imindeni yase-Afrika kanye neyamaNdiya ibuyele eCato Manor, yathola umhlaba owadliwa. Njengoba kungekho mgomo wentuthuko ocacile, le ndawo yakhula ngokushesha yaba idolobhana lemikhukhu, amashibhini nezitolo zama-spaza ezinezinkinga eziningi ezihambisana neCato Manor ngeminyaka yango-1950. Ngokubona eCato Manor njengethuba elihle lokulungisa amaphutha esikhathi esedlule, idolobha laseThekwini laqala iphrojekthi yokuthuthukisa amadolobha, yathola udumo emhlabeni wonke njengesibonelo sentuthuko edidiyelwe. Le ndawo manje inezindlu ezimba eqolo, isikhungo samagugu, izikole, imitapo yolwazi, izikhungo zomphakathi nemitholampilo futhi ihlala abantu abangu-90 000.